Ilay scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future sy ny fandrosoana | Omeo fialamboly aho
Gabriela moran | | Cine, Sarimihetsika foronina siansa
Azo antoka fa efa nahita na, farafaharatsiny, naheno momba ny trilogy sarimihetsika mahomby Miverina amin'ny ho avy. Ny sarimihetsika voalohany dia navoaka tamin'ny taona 1985 ary nanjary fahombiazana indrindra tamin'ny taona. Tena lehibe tokoa ny fahombiazany ka nanapa-kevitra ny hamoaka tohiny efa-taona taty aoriana miaraka amin'i Steven Spielberg ho mpamokatra! En ity sarimihetsika faharoa ity izay isehoan'ny scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future 2.
Ireo sarimihetsika telo dia starring Michael J Fox as Marty McFly and Christopher Loyd as eccentric scientist Emmet Brown. Ny sarimihetsika tsirairay dia nametraka ny mpilalao fototra tamin'ny vanim-potoana samihafa noho ny fitsangantsanganana amin'ny DeLorian. Tsy misy isalasalana fa ny trilogy dia naneho fivoarana lehibe eo amin'ny karazana science fiction. Fa ambonin'izany rehetra izany, ny fizarana faharoa dia niteraka fanantenana lehibe momba ny ho avy sy ny fivoarana teknolojia mety hisy, toy izany ny momba ilay scooter amin'ny sarimihetsika. Vakio hatrany raha te hahalala ny pitsopitsony rehetra momba an'ity gadget vaovao ity sy izay vaovao momba azy!
1 Ilay scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future 2
2 Miverina amin'izao fotoana izao… Ankalazaina ny faha-30 taonan'ny andiany!
3 Efa zava-misy ve ilay scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future?
4 Inona no antenaina izao?
5 Skuter ankehitriny
Ilay scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future 2
Ilay maherifo dia Marty: zatovo 17 taona izay mandeha amin'ny toerana hafa hatrany amin'ny scooter-ny ary izy koa dia ao anatin'ny vondrona mozika an-tsekoly izay itendreny gitara. Manana sipa antsoina hoe Jennifer izy ary ny sakaizany akaiky indrindra dia i Emmet, mpahay siansa izay mitondra azy amin'ny dia lavitra ary fantatra amin'ny anarana hoe "Doc."
Nanomboka ny taona 1985 ny sarimihetsika ary mandeha any amin'ny 30 taona ho avy ireo mpihetsiketsika. Mila mamita iraka amin'ny 21 oktobra 2015 ry zareo!
Back to the Future 2 dia iray amin'ireo sarimihetsika mahomby indrindra amin'ny karazana science fiction. Nanaitra ny vokany manokana ny fotoanany! Ny zava-misy lavitra ny sary XNUMXD, fiara manidina ary ny scooter nampiasain'i Marty dia natsangana.
El scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future dia nanjary sary famantarana ho an'ireo mpankafy ny trilogy. Tsy nahy ny fihaonan'i Marty tamina fitaovam-pitaterana an-tsoratra vaovao toy izany satria fomba iray nandreseny tamin'ny ady tany amin'ny faritra iray amin'ilay tetika io.
Ankoatry ny tantara dia azontsika lazaina, tsy misy tahotra sao diso, izany ny zavatra misy ifandraisany indrindra amin'ity sarimihetsika ity dia ny fahitana izay namolavolan'ireo mpamorona ny ho avy. Ny sarimihetsika dia maneho ny valiny mety hitranga amin'ny fanontaniana mandrakizay: hanao ahoana ny ho avy afaka fotoana fohy?
Miverina amin'izao fotoana izao… Ankalazaina ny faha-30 taonan'ny andiany!
Nahita antsika ny ho avy ary tonga ny taona 2015! Niandry ny 21 Oktobra ireo mpankafy. Izany, satria tamin'ny horonantsary faharoa, izany no daty voatondro tokony hitranga amin'ny fahatongavan'i Marty sy Doc amin'ny fotoantsika.
Ho fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-30, namoaka indray ireo horonantsary telo tamin'ny sinema ny firenena sasany. ny hafatra ofisialy avy amin'ny Doctor Emmet Brown hiresaka amin'ireo mpankafy ilay saga ary aseho etsy ambany:
Goavana ny fanantenana satria fahagagana maro no mety hitranga. Fotoana iray nanararaotan'ny orinasa manararaotra izany! Toy izany ny nataon'i Nike, Pepsi ary Lexus. Ity orinasa fiara farany ity dia nanolotra ny prototype voalohany azo ampitahaina amin'ny scooter manidina malaza avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future 2.
Efa zava-misy ve ilay scooter manidina avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future?
Orinasa maromaro no namolavola prototypes hahatratrarana ilay maodely izay miasa amin'ny fomba nataon'ny scooter tamin'ilay sarimihetsika. Lexus, ny marika fiara malaza dia iray amin'izany
Slide no anaran'i Lexus ho an'ny scooter manidina ary mitsingevana amin'ny rivotra izy ary afaka mitsoraka ambonin'ny tany! Mampiasa teknolojia efa misy ilay fitaovana: levitation andriamby. Izany no antony, indrisy, tsy mandeha amin'ny sehatra rehetra izy io, izany hoe, afaka mandeha fotsiny amin'ny làlan-kaleha misy andriamby manokana.
Ny scooter Slide dia miasa miaraka amin'ny azota mitete ho solika, ho fampitahana. Ka rehefa mafana ny scooter dia very ny levitation ary mila fenoina azota indray. Ny salanisan'ny fampiasana an'ity scooter manidina ity dia 20 minitra eo ho eo. Lexus natsangana tao Cubelles, tanàna iray any akaikin'i Barcelona, ​​lalana iray manokana mba hosedraina.
Ity scooter manidina ity Tsy amidy, mandritra ny fotoana prototype fotsiny io. Ary farany, nanararaotra ny fandrosoana ara-teknolojia tamin'ny Slide sy ny fiverenan'ny Back to the Future ny marika mba hampiasana azy io ho toy ny dokam-barotra ho an'ny fiarany.
Inona no antenaina izao?
Mitohy ny fikarohana sy ny fampiasam-bola ataon'ireo orinasa hahazoana teknolojia ilaina hitondrana ilay scooter manidina efa nandrasana hatrizay avy amin'ny sarimihetsika Back to the Future.
Hendo dia orinasa iray izay nanomboka ny tetik'asa scooter manidina izay afaka natao varotra nandritra ny taona maro. Na dia tsy mampiasa nitroka ranoka aza ny Hendo Hoverboard, dia mbola misy fetrany ihany amin'ny fandefasana azy.
Hendo dia nampiasa famoriam-bola iraisana izay nahazoam-bola mahaliana. Inona koa namidy prototypes vitsivitsy izay mitentina 10 dolara amerikana isaky ny scooter!
Noho ny asa fikarohana sy fampandrosoana, Hendo dia namorona prototypes maromaro izay notanterahiny. Mampiseho azy ireo amin'ity sary manaraka ity aho:
Navoaka tamin'ny taona 80 ny trilogy, fotoana iray izay nalaza indrindra ilay scooter ho fitaovana fitaterana sy fialamboly. Tsy misy afaka mieritreritra ny mety hisian'ny sidina iray! Azo antoka fa ny fizarana faharoa an'ny trilogy dia nampiakatra ny fanantenana tao an-tsain'ny mpijery. Ny sasany amin'izy ireo dia efa ampahany amin'ny fiainantsika andavan'andro ary ny hafa tsy manana fotsiny.
Ny atao hoe zava-misy dia izany ny tanjon'ny orinasa maro dia ny handefa scooter manidina miaraka amin'ireo asany mitovy amin'ilay nampiasain'i Marty McFly.
Manana gadget azo amidy izahay izao ary izay nanjary nalaza be: ny scooter elektrika ary izy ireo dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny artefact an'ilay sarimihetsika.
Zava-misy io fa mihamanakaiky hatrany isika! Toa tonga haingana kokoa noho ny nampoizina ny tampoka ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » Cine » Hihaona amin'ny scooter manidina avy any Back to the Future